Talooyin Ku Saabsan Wadista Roobka | Saadaasha Shabakadda
Talooyin ku saabsan wadista roobka
Qaadashada gaariga maalin roobaadka waxay u noqon kartaa khibrad aad u wanaagsan dadka qaarkiis, maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa inay dareemaan deganaan iyo degganaansho, halka kuwa kale aysan jeclayn. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan wax ay tahay inaan sameyno waa had iyo jeer ixtiraam xeerarka nabadgelyada waddooyinka, iyo gaar ahaan maalmaha roobku da'o.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaan kuu soo bandhigeynaa taxane ah talooyin ku saabsan wadista roobka.
1 Meel fog ka nabad gal
2 Ka fogow baraagaha
3 Hubi xaaladda burushyada
4 Nalalka shido
Meel fog ka nabad gal
Waa waxa ugu muhiimsan. Haddii midka hore uu garaaco biriiga, gaarigaaga waa inuu helaa meel ku filan oo uu ku joogsado waqtiga. Wadooyinka marka roobku da'o waxay noqon karaan kuwo sibiibix ah, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad uga tagto dhowr iyo toban mitir inta u dhaxeysa gawaarida. Tusaale ahaan:
Haddii aad gaari ku wado wado xawaareheeda ugu badan yahay 90km / saacaddii: masaafada nabadgelyadu waa inay ahaataa 81 mitir.
Haddii aad gaari ku wado wado xawaareheeda ugu badan yahay 100km / saacaddii: masaafada nabadgelyadu waa inay ahaataa 100 mitir.
Haddii aad gaari ku wado wado xawaareheeda ugu badan yahay 120km / saacaddii: masaafada nabadgelyadu waa inay ahaataa 120 mitir.
Ka fogow baraagaha
In kastoo ay kuugu muuqdaan kuwo gacmo hoose, iska ilaali. Puddles waxay ka ilaalisaa taayirrada inay si fiican ugu dhegaan wadada, ilaa heer bareega si kadis ah uu u keeno hydroplaning, waadna lumin kartaa xakameynta gaariga.
Hubi xaaladda burushyada
Intii aad wadid aad ayey muhiim u tahay inaad wax arki karto, marka haddii ay tahay inaad ku kaxeyso gawaarida roobka iska hubi in masaxayaasha muraayadaha hore ay ku jiraan xaalad qumman.
Markuu roob da'o, aragu badanaa wuu hooseeyaa ama xitaa aad ayuu u hooseeyaa, sidaas waa inaad daartaa dogobyada hoose, iyo haddii aadan si dhib ah wax u arag, sidoo kale nalalka ceeryaanta dambe si darawalada kale ay kuu arkaan sidaasna ay shilka uga fogaadaan.
Tilmaamahan, waxaad ku wadi kartaa roobka adiga oo aan walwal gelin 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Talooyin ku saabsan wadista roobka